BBC Burmese - အစီအစဉ်များ - မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ဧရာဝတီသံစဉ်
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 25 စက်တင်ဘာလ 2011 - 16:24 GMT
ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကတော့ . . .
မျှော်လင့်ခြင်းကမ်းခြေ ဗီစီဒီအတွက် အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ် ဖောင်စီးရင်း သီချင်းဆို
လတ်တလောကာလ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့အကြောင်းက Hot နေတာမို့ ဒီမြစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂီတ အနုပညာရှင်တွေကရော ဘယ်လို ခံစားမိကြလဲ၊ ဘယ်လို သီချင်းတွေ စပ်ဆိုကြသလဲဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ သားထွေးနဲ့ ဂီတအနုပညာရှင် ကိုရဲလွင်တို့က ပြောပြထားပါတယ်။
သို့ . . . မိုဘီ ဂျီနို . . .
မိုဘီ ဂျီနို အစီအစဉ်ဟာ Mobile Generation ဒီနေ့ခတ်ရဲ့ ရှင်သန်ရွေ့လျားနေတဲ့ မျိုးဆက် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီမျိုးဆက်ထဲက လူငယ် လူရွယ်တွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်း အရာတွေ တင်ဆက် နေသလို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ အနာဂတ် အိပ်မက်တွေအကြောင်းကို ဒီအစီအစဉ်ကနေ ဝေမျှပြောပြကြဖို့ အမြဲ ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိ ပါတယ်။
မိုဘီ ဂျီနိုကဏ္ဍနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ဝေဖန်အကြုံပြုလိုရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ခံစားချက်တွေကို ဝေမျှပြောပြချင် လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။
အီးမေးလ်နဲ့ဆိုရင် burmese@bbc.co.uk ဆီကို ဆက်သွယ်နိုင်သလို စာတိုက်ကဆိုရင်တော့ စာတိုက် သတ္တာအမှတ် ၉၉၇ ကမ်းနားလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဆီကို ရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။
အဓိက ဇာတ်ကောင် ရွန်၊ ဟာမာနီ နဲ့ ဟယ်ရီ
စာရေးဆရာမှာ ဂျေကေ ရိုးလင်းနဲ့ အတူ
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းအတွက် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ မျက်ရည်တွေ
အထူးပွဲမှာ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း သောင်းဂဏန်းလာအားပေး
အမ်မာ ဝပ်ဆင်နဲ့ ဒန်နီယယ်လ် ရက်ကလစ်ဖ်
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ထူးအိမ်သင် ၂
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ
မိုဘီ ဂျီနိုနဲ့ USက မြန်မာရဲ
မိုဘီ ဂျီနို နဲ့ သဘာဝလူငယ်